Dota 2 haisi kuita zvakanaka – Statistics dzichangoburwa 4 zvakaipisisa zvegore
Dota, mumwe wemitambo ine vatambi vakawanda kwazvo pasirese 2, iri kubuda ropa mazuva ese.
Turkey ndiyo nyika mamirioni evadikani uye ichi ndicho chokwadi icho Dota 2 zvinhu hazvifambe zvakanaka zvachose. Iyo yepamwedzi average average player nhamba yevatambi vaviri vane huwandu hwevatambi vari kudonha zuva rega rega 2014 Izvo hazvina kuve zvakashata kubva Kubvumbi.
2011Kubva payakatangwa mu 2015 akachengetedza mufananidzo uyu kusvika parwendo. 2015 Mutambo uyu, uyo wakatanga kupora mushure memwedzi mishoma yekudzikira muna 2003, wakaramba uchisimuka zvakare kubva pawakawira. 2016 Kusvikira Gumiguru.
2016 Kuderera mumwedzi pamwedzi nhamba dzemutambi munaGumiguru yemutambo uyo usina kudzorerwa kubvira musi iwoyo. Mwedzi watakasiya kumashure 780.000 mutambo unovhara neavhareji mutambi wakave wekupedzisira muna Kubvumbi 2014,(kukwidziridzwa kwaive nenhamba dzakaipa kudaro.
Nei uye nei mutambo wakasvika panguva ino inyaya yekuda kuziva.. Dzidziso zhinji dzinoiswa pamberi peizvi.. Ngationgororei zvine musoro kwazvo pamwe chete..
1) Esports Stage iri yeGlobal uye Hapana Investment munzvimbo
1.1) Esports Stage Kuva Wenyika Dzese
Sezvaunoziva, muDota 2, Yemunharaunda ligi sisitimu senge League of Legends haina yemuno manejimendi system iyo iri uye. Izvo zvinoisa vatambi mumakwikwi chete nhanho iri pasi rese. Kunyangwe vatambi vepamusoro-soro vatanhatu havagone kuwana nhandare yekuratidzira kana kugutsa pfungwa yavo yemakwikwi, sezvo mutambo uchikwikwidza izvi zviri zvepasirese..
Ngativerengei pamwe chete; Puppey, KuroKy, Universe, Kutya, Dendi, EE, Notail, Fly, Chiso-, Solo, s4 zvimwe izvo uye. Isu tanga tichinzwa aya mazita kubvira 2011-2012.. Pamutambo, Vashoma vatambi vanogona kubata iyo yepasirese danho. Zvirokwazvo kwete. Tinogona kufunga nezve Chishamiso-chitsva kunyangwe, ngatitorei Sumail seyatsva kuitira kuti chero kwatinotarisa 4. asi ngativerengei gore zvakadaro. Pamusoro pezvo tinoverenga mashoma asi tichiri kukwanisa kuwana zvakakwana. Isu tinoona iwo mazita akafanana nguva dzese, izvo zvinoratidza kuti iwo mamiriro haagoni kugadzirisa..
Nekuda kwekushomeka kwenzvimbo yeligi system, kunyangwe ivo vatambi vepamusoro-nhanhatu havawani nguva yekugara pasi nekukudziridza timu yavo izvi ndezvechokwadi uye nekuti havagone kuwana mari kuburikidza nemutambo uyu, uye nekudaro, ivo vanofanirwa kusarudza mumwe mutambo wezvinangwa zvebasa kana kunanga kunanga kune basa kunze kwemutambo. kugara.
Ndiro danho ratinopa mienzaniso kubva kuTurkey kana zviitiko zvekufarira kune vateveri vechikwata chemuno vasingakwanise kuwana iyo Dota'nın esp inorasikirwa nevatambi mazuva ese. Izvi zvinokanganisa zvakananga zvese kunakidzwa kweDota munyika uye nekuziva kwemutambo mukati medzinza.. Kana mamiriro akadaro akasanganiswa, kuderera kwenhamba yevatambi hakudzivisike..
1.2) Hapana kudyara munharaunda.
Takataura pamusoro, Kana pasina mari munzvimbo, timu uye mutambi munharaunda havagone kuzviratidza padanho hombe. Izvi zvinokanganisa zvakananga kubviswa kwevatambi vatsva kubva munyika iyoyo.. Kunze kwechinhu ichi;
Kana pasina yemunharaunda makwikwi sisitimu uye institution yekuita manejimendi basa pane yemuno hwaro, Iko hakuna basa rekushambadzira pane yemuno hwaro, mutambo ndizvozvo uye haugone kusvika kune vatsva vatambi. Tichifunga kuti League of Legends inoshambadza kubva kuYouTube kune kushambadza uye kuronga maratidziro kunyangwe mune dzekutengesa kofi dzemuno, uku kushomeka kukuru.. Nekuda kwekushomeka uku, hapana vatambi vatsva vanouya kumutambo, zvekare izvo uye zviverengero zvinobatika zvakananga pavanosiya mutambo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana nekufamba kwenguva..
2) Mutambo Wekunakisa Mhedzisiro mhedzisiro pane izvo uye nhanho yayo
2.1) Iwo Mutambo Wekunakidzwa MaMods Haachave Akafadza
Dota 2, kunyanya mumatanho avo ekutanga “divi-mutambo” yakaita kuti mutambo uyu uwedzere kufadza nekudzora zviitiko zvawo muchimiro chekunaka kusvika padanho risingadaviriki.. Ichi cheesy, Akaenderera mberi nekuwana mari kubva mumitambo iyi, neiyi inonyima chaizvo maererano nemubairo waakapa muruoko uye kupera kwemutambo..
Kubvunza munhu wese. Hatidi here kuti riuye nenzira yakaipa?? Hatidi here kuti Frostivious iuye?? Hatingatambe here kana mutambo mumwe chete ukauya neyakaenzana mubayiro?? Isu tinotamba. Akanga achitaura izvi kwete kwatiri chete asi zvakare mumaforamu mazhinji, kunyanya Reddit, vatambi kutenderera pasirese, asi hapana mhedzisiro..
Panzvimbo pekudzora kunouya mutambo chete izvi ndizvo chaizvo uye varidzi vayo vanogona kutora chikamu kana 10 iwe unofanirwa kutamba mutambo uyo kukosha kuri mumusika 50 penny uyo anogona kuhwina chipo.
Pamusoro pekukwikwidza maitiro, kuderera kwezvakadai zvinozonetsa uye kunakidza mutambi ndicho chimwe chezvinhu zvikuru mukuderera kwenhamba yevatambi..
2.2) Zvitsva paNo Level
Ndiri kunzwa “magamba maviri achangopfuura uye 4-5 chinhu chakasvika hunyanzvi izvi ndizvozvo chaizvo” zvaunotaura. Mataura chokwadi pamusoro pemagamba, asi zvinhu… Zvakawanda sei zvatinoona Meteor Hammer neAeon Disc mumitambo yedu? Zvakawanda sei isu zvatinoona iyo Nullifier? Saizvozvo, izvi zvinhu zvitsva, iko kuwedzera kwete shanduko. Iko shanduko kushandura iyo MMR system uye kuitsiva iyo neBheji system..
Paive nekukwira kumusoro mune izvi zviri chokwadi uye avhareji mutambi nhamba nguva inotevera iyo Bheji rakauya, sezvo vanhu vakafunga kuti chimwe chinhu chitsva chiri kuuya pakauya bheji system, asi zvobva zvazoitika kuti hapana chinoshanduka musystem.. Iyo nyowani system yaingova iwo MMR system yakaratidzwa. Vanhu havana kufarira mamiriro aya futi..
Mukubatanidzwa kweizvi zvese, tinogona kunzwisisa kuti nei mutambo iri hupenyu unoenderera zuva nezuva.. Takaedza kugadzirisa matambudziko aDota 2 nepese patinogona napo. Tinodawo kunzwa pfungwa dzenyu. Iwe unogona kuratidza maonero ako pasi pedu enhau enhau..
Zvakauya sei E-Spor??
Kuberekwa kweE-Mitambo kuri chaiko kwakura kupfuura zvaungafunge.. 70Nekushandiswa kwakawanda kwema arcade horo muma1980s uye ma1980, kushamwaridzana kwevechidiki nekutamba mitambo uye kukwikwidza pamwechete ndiko kunobva mavambo e-Sports.. Makomputa emunhu anopinda mudzimba, Nekupararira kweinternet uye kubuda kwemitambo yakasiyana siyana yemakwikwi, nhasi e-Nhabvu iri kukurumidza kukura nekupararira..
Nhasi, mazhinji emunyika uye mazhinji e-Sports makwikwi anoitwa ayo epasirese. Aya makwikwi akabatsira zvakanyanya mukuvandudzwa kwemitambo yemagetsi nemitambo yemitambo nekupa nharaunda yehunyanzvi uko vatambi vanogona kukwikwidza.. Iyi ndiyo nhamba yemitambo yepamutemo uye yakavanzika yakarongedzwa zuva rega rega uye kufarira kwakaratidzwa kunowedzera, Saizvozvowo, iyo nzira yakavezwa ye e-Vatambi kuti vaite izvi sehunyanzvi hwehunyanzvi.. Iye zvino e-Mitambo yemitambo ine mibairo inosvika kumamirioni emadhora uye zviuru zvevatariri munhandare, chashanduka kuita zviitiko zvakateverwa nemazana ezviuru enhepfenyuro dzepamoyo pa internet.. Mazana emakirabhu eE-Sports akagadzwa pasi pemuraira wemakambani akasiyana siyana nevatsigiri vanoshanda munzvimbo dzakasiyana dzeE-Sports uye makirabhu aya anodzidzisa nguva dzose senge nhabvu yemitambo., kukwikwidza mumaligi akasiyana siyana uye makwikwi uye simbisa vashandi vavo nekuchinjisa pazvinenge zvakakodzera.. Uye zvakare, munyika dzakasiyana siyana dzepasi, ivo vatanga kuwana marezinesi emitambo nekuverengerwa saiyo maE-Athletes.. MuTurkey 2014 ajoina nyika dzinopa marezinesi kubvira pa.
Chii chinonzi Esports? Bora Koçyiğit akaudza Fanatik!
Steve, mumwe wevanogadzira DOTA, neRiot Games “Guinsoo” Uyu muenzaniso wezvakakosha izvo uye DOTA zvakabuda pasi pehutungamiriri hwaFeak.. Sezvo mutsauko weizvozvo uri mumutambo kubva kuDOTA” uye “Runes” ine hurongwa. Kusiyana neDOTA, mipiro yatinogashira pahunyanzvi hwemagamba atinoshandisa muLOL inogona kuwedzerwa kune izvi zvinhu chaizvo.. Kwenguva yakareba sevha yakasarudzika yeTurkey uyu ndiwo mutambo uye bazi muTurkey. Nemitambo yeRiot pakati pemayunivhesiti ari munyika medu, anofanira Turkey, uye Turkey zvakarongedzwa akasiyana siyana emitambo makwikwi mukati mese, Izvi zviitiko zvinoonekwa seyakanyanya e-Mitambo zviitiko munyika medu.. Galatasaray, Beşiktaş naFenerbahçe zvakare vane zvikwata.
Dota 2 chii chinonzi kutamba?
Kudzivirirwa kwakabatana nevekare(Dota) yakatanga semod yakagadzirwa yeWarcraft III, mutambo wezano, DOTA nechibvumirano chemugadziri Icefrog nekambani yemutambo Valve 2 yakazvimirira yeWarcraft III inonzi, yakatumirwa semutambo wakasiyana uyo.
Mutambo unoitika muchimiro chezvikwata zviviri zvevanhu vashanu zvinosangana izvo. Pakutanga kwemutambo, mutambi wega wega igamba(gamba) anosarudza. Zvino izvi zvechokwadi vatambi vari kurwira mamwe magamba uye makomputa anodzorwa mamonya akagadzirwa otomatiki.. Nekuuraya mamwe magamba uye zvikara mumutambo, unogona kuwana mari poder uye hunyanzvi mapoinzi, kukwirisa uye kugadzirisa ako maficha, uye iwe unogona kutenga gamba rako nekushandisa yako mari.. Chinangwa chikuru chemutambo ndechekudzivirira chivakwa chikuru cheboka rega mukona yavo uye kuputsa chivakwa chikuru mukona yechikwata chakatarisana.. Chikwata chekutanga kuita izvi chinokunda. Amateur / nyanzvi dzemitambo dzakarongedzwa nemasangano akasiyana siyana munyika medu.. (E-Bergi yakashandiswa)
Next: Chikwata cheLegends